महानायक विवादको साइड इफेक्टः भुवन-शिव अभिनित गीतको दुर्दशा, कोपभाजनमा स्व. खेमराज गुरुङ – Nepal Press
२०७८ असोज २४ गते ८:३८
प्रसंग हो महानायक विवादको । राजेश हमाललाई महानायक मान्ने कि नमान्ने भन्ने किचलो अहिले उत्कर्षमा छ । यस विवादका विभिन्न साइड इफेक्ट देखिन थालेका छन् । जो-जो कलाकारले राजेश हमालको महानायक पदवीमाथि प्रश्न उठाएका छन् उनीहरुले हमालका फ्यानहरुबाट साइबर आक्रमणको सामना गर्नुपरेको छ । यति मात्र होइन, यस्ता कलाकारले अभिनय गरेका फिल्म नै धरापमा पर्ने खतरा देखिएको छ ।
नेपाली फिल्मका तीन लिजेन्ड भुवन केसी, शिव श्रेष्ठ र गौरी मल्लले एकसाथ अभिनय गरेको फिल्म ‘डाँडाको वरपीपल’ को एउटा गीत केही दिनअघि युट्यूवमा रिलिज गरियो । यही गीत रिलिजका अवसरमा गरिएको कार्यक्रममा निर्देशक शोभित बस्नेत तथा नायकद्वय भुवन र शिवले महानायक-महानायिकाको विवाद निकालेका थिए, जुन उनीहरुका लागि आत्मघाति सावित भएको छ ।
गीत खराब छैन । वास्तवमा यो एउटा कर्णप्रिय गीत हो र हिट हुनुपर्ने थियो । तर दर्शक रिसाएपछि के लाग्छ ? स्मरणीय के छ भने यो गीत लोकप्रिय गायक स्वर्गीय खेमराज गुरुङले गाएका हुन् । ‘वारी जमुना पारी जमुना’ बाट प्रख्यात खेमराजले मृत्युअघि गाएको सम्भवत अन्तिम गीत थियो यो । तर, महानायक विवादको कोपभाजनमा परेका छन् गुरुङ । एउटा सम्मानित गायकको गीत मृत्युपर्यन्त यसरी बाह्य कारणले आलोचित हुनु दुखद हो । गुरुङको ५ वर्षअघि निधन भएको थियो ।
शोभित बस्नेत निर्देशित चलचित्र ‘डाँडाको वरपीपल’ दसैंमा रिलिज गर्ने तयारी छ । तर, युटट्यूवमा दर्शक प्रतिक्रिया हेर्दा फिल्मको लगानी जोखिममा देखिन्छ । धेरैले यो फिल्म नहेर्ने भन्दै कमेन्ट गरेका छन् ।
प्रकाशित: २०७८ असोज २४ गते ८:३८